Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Debian 11 Bullseye
Tọzdee, Septemba 30, 2021 by Jọshụa James
Bubata igodo GPG na ebe nchekwa Opera
Bubata ebe nchekwa Opera (Atọ ka ịhọrọ na)
Wụnye ihe nchọgharị Opera
Otu esi eme ihe nchọgharị Opera
Otu esi emelite ihe nchọgharị Opera
Otu esi ewepu (wepụ) ihe nchọgharị Opera
opera bụ freeware, ihe nchọgharị weebụ cross-platform nke Opera Software mepụtara ma na-arụ ọrụ dịka ihe nchọgharị dabere na Chromium. Opera na-enye ihe nchọgharị weebụ dị ọcha, nke ọgbara ọhụrụ bụ nhọrọ ọzọ na ndị isi egwuregwu ndị ọzọ n'ọsọ ihe nchọgharị ahụ. Ụdị Opera Turbo a ma ama na ọnọdụ nchekwa batrị a ma ama bụ nke kacha mma n'ime ihe nchọgharị weebụ niile ama ama site na oke oke, yana VPN arụnyere na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye ihe nchọgharị Opera na Debian 11 Bullseye.
Iji wụnye Docker nke ọma, ị ga-achọ ịwụnye ngwugwu ndị a; gbaa iwu a ma ọ bụrụ na ị maghị; ọ gaghị emerụ gị usoro.
Na nzọụkwụ mbụ, ị ga-mkpa ibudata igodo GPG iji nyochaa eziokwu ngwugwu mgbe ị na-etinye ya na sistemụ gị.
Na-esote, Opera nwere ebe nchekwa atọ ịhọrọ site na, nke kwụsiri ike, beta na onye nrụpụta. Tinye ebe nchekwa nke ịchọrọ ịwụnye dị ka n'okpuru:
Ebe nchekwa kwụsiri ike (atụ aro):
Ebe nchekwa beta:
Ebe nchekwa onye nrụpụta:
Ugbu a ị bubatala ebe nchekwa ahụ, ị ​​nwere ike tinye Opera ugbu a site na iji ihe ndị a.
Ugbu a, wụnye Opera Browser site na ịme iwu ziri ezi na ebe nchekwa ị webatara.
Iji wụnye ụlọ siri ike:
Mara, ị ga-ahụ mgbe ị na-etinye ihe nchọgharị Opera ka ịhazi ya ka enye ohere maka nkwalite ụdị ọhụrụ.
họrọ OK na pịa Tinye igodo ịga n'ihu. Na-esote, ị ga-enweta ngwa ngwa ọzọ.
Họrọ ma (Akwadoro) ma ọ bụ imelite Opera na sistemụ Debian ndị ọzọ mgbe ị na-eji ya iwu mmelite dabara adaba. Ozugbo ịhọrọ nhọrọ, pịa Tinye igodo ịga n'ihu na mezue nrụnye.
Maka nrụnye beta/onye nrụpụta ọzọ, mee nke ọ bụla n'ime ihe ndị a n'ime ebe nchekwa ị bubatara na mbụ:
Iji tinye beta:
Iji wụnye onye nrụpụta:
Ozugbo arụnyere, nyochaa nrụnye site na ịlele nọmba ụdị:
Na nrụnye zuru ezu, ị nwere ike ịgba ọsọ Opera n'ụzọ dị iche iche.
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ Opera & nye iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọdụ ụgbọ ala:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Opera. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ugbu a mepee ihe nchọgharị Opera, ị ga-ahụ ibe ọdịda. Ọ mara mma?
Ọmụmaatụ maka kwụsiri ike:
Iji wepu Opera na Ubuntu 20.04, mebie iwu njedebe a:
Ọmụmaatụ iwepụ alaka Opera kwụsiri ike:
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi ebubata ebe nchekwa Opera n'ime ndepụta isi mmalite ma wụnye ihe nchọgharị weebụ site na ịhọrọ ma ọ bụ nke kwụsiri ike, beta, ma ọ bụ alaka ndị nrụpụta. N'ozuzu, Opera na-eji igwe na-emepụta ibe Chromium, yabụ ị gaghị enwe ike ịbanye na saịtị enweghị ndakọrịta. Ịrụ ọrụ ngwa ngwa, ikekwe ọ bụghị oriri na ubi. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-edobe nke ya ma nwee atụmatụ pụrụ iche nke na-eme ka nke a bụrụ ihe ọzọ mara mma maka ọtụtụ ndị ọrụ Linux bụ ndị na-achọ ihe dị iche ma e wezụga Firefox nke na-abịa na ọkọlọtọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe Linux niile.
Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na openSUSE Leap 15
Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Rocky Linux 8
Wụnye ihe nchọgharị Opera na Fedora 34/35
Otu esi etinye Opera Browser Stable, Beta, ma ọ bụ…
Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Pop!_OS 20.04
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Opera Nchọgharị Mail igodo
Otu esi etinye ma jiri Telnet na Debian 11 Bullseye